Casemiro Childhood Story Plus Untold Biography Facts
घर अमेरिकी स्टेर्स Casemiro Childhood Story Plus Untold Biography Facts
नोभेम्बर 5, 2017
एलबी पूर्ण फुटबल प्रतिभा को प्रस्तुत गर्दछ जसले सर्वोत्तम उपनाम द्वारा जान्छ; "नयाँ मेबलले"। हाम्रो क्यासमेरो बचपन स्टोरी प्लस अनबल्ड जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय सम्मको उल्लेखनीय घटनाहरु पुरा खातामा ल्याउनुहुन्छ। हाम्रो विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उहाँका बारेमा धेरै र जाने-जाने तथ्यहरू भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले आफ्नो क्षमताको बारेमा चिन्ता छ तर केहि कम क्यासिमेरो जीवनी विचार गर्दछ जुन धेरै रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
Casemiro Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
कार्लोस हेनरिक्स जोसे फ्रान्सिस्को भेन्न्न्सिओ क्यासिमिरियो को रूपमा मात्र भनिन्छ 'कैसीमेरो' साउ जेस डिस क्याम्पस, साओ पाउलो, ब्राजिलमा 23 फेब्रुअरी 1992rd मा जन्मेको थियो। उहाँ वेनिसान्को मग्दा डे फरिशिया क्यामेमेरा (आमा) र सर्सेन्डो क्यासिमेरो (बुबा) मार्फत यस संसारमा आउनुभयो।
क्यासमेरो उहाँको आमाबाबुको पहिलो पुत्र हो। उहाँले आफ्नो जैविक बुबाको अनुपस्थिति घरमा बच्चाछोरीको सुरुवात सुरु गर्नुहुन्थ्यो [पूर्ण स्टोरीमा लेखिएको लेख]। उनको सुपर मा, भेनिसान्सीले उनलाई शिक्षा दिनको लागि सबै भन्दा राम्रो सम्भव गरे। कठोरताले एक साधारण गरीब बच्चाको रूपमा सामना गर्यो जुन असाधारण भाग्यको लागि क्यासमेरो तयार पर्यो जुन कुकुर र सफलताको दृष्टान्त हो।
तिनको बचपनको समयमा ग्रामीण साओ पाउलोमा युवा केटाकेटी फुटबलमा गएका थिए जसको रूपमा धन कमाईको जीवनकाल थियो। युवा क्यासमेरोको अपवाद थिएन, उनी सबै भन्दा आक्रामक तरिकामा बहुभाषी (शिक्षा र फुटबल मिश्रण) सक्षम थिए।
Casemiro Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -सारांशमा क्यारियर
यो निल्टन डी यीशु अतिरिक्तरा थियो, एक लोकप्रिय फुटबल विद्यालयको मालिक जसले क्यासिमिरोरोलाई आफ्नो अकादमीमा ल्याउन मद्दत गर्यो।
पलिस्टा डे Futebol एक सहबद्ध साओ पाउलो अकादमी त्यहाँ सानो क्यासमेरोको युवा युवा फुटबल सुरु भयो।
उनले ठूलो खुशी महसुस गरे र अहिलेसम्म, नील्टन दे यीर ओरारा र उनको परिवारले उनको अवसरको लागि अझै पनि धन्यबाद छ। उहाँले तिनीहरूलाई कहिल्यै निराश पार्नुभयो।
क्यासमेरोको उपयोगी उत्पादन बन्न कठिन भयो साओ पाओलो एफसीको युवा प्रणाली। 11 को उमेर देखि, उनको कप्तान को रूप मा कार्य गरे। उनको आशा छ कि जब उनि 2009 फीफा यू-17 विश्व कप मा भाग लिया तब उनले धेरै प्रदर्शन गरे। यो पनि उनको द्वारा साओ पाउलो को 2012 मा कोपा सुडेरियाकाना जीने को लागी पनि थियो। यसले उनलाई घनिष्ठ आँखामा र युरोपभरि स्काउट्स र क्लब प्रबन्धकहरूको खरीदारी सूचीमा बनायो। यसले पहिले लामो समय लागेन रियल म्याड्रिड उनीहरूको सेवाका लागि कल गरिरहेको थियो।
Casemiro Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
क्यासमेरो एक मध्यम मध्यम वर्गको परिवारको पृष्ठभूमिबाट आउँछ जुन केवल एक अभिभावक, तिनको सुपर माईको नेतृत्वमा रहेको थियो जसले मात्र Venancio भनिन्छ। यहाँ, तपाईलाई उनको परिवारको बारेमा संक्षिप्त जानकारी दिइयो।
फेथर: क्यासमेरोसँग आफ्नो बुबाको दुखाइ मेमोरी छ जुन लेखनको समयमा अझै जीवित छ। स्टीयरिंग व्हीलले राम्रो सम्झनाहरू राख्दैन। लिटिल क्यामेमेरा युगमा5ले उनको आमा (गर्भपतनको क्यामेमेरो) को आफ्नो आमा संग विवादास्पद संकटको परिणामस्वरूप उनको घर छोडेर बिहे गरे। भक्तपुरले आफ्नो छोरालाई बनाएको भए पछि पछाडि आएको थिएन।
जब च्याट गर्दा उनको बुबाको बारेमा कुरा गर्दै Globoesporte, Casemiro ले भन्यो ..."यदि म आज सडकमा हेर्छु भने, म उहाँलाई चिन्न सक्दिनँ। मेरो पाँच वर्षको हुँदा उनी मेरो आमासँग गम्भीर लडाई थियो र परिवारलाई मेरो आमाको व्यवस्थापन गर्न छोड्यो। म उहाँलाई भेट्न चाहन्थें किनभने मेरो विरुद्ध कुनै दबाब छैन। यो परमेश्वरले मलाई मेरो लागि चाहनुभएको थियो। यसैले मैले सधै यसलाई छोड्नुभएको छ "
मातृभाषा: उनीहरूले आफ्नो पिताबाट कुनै शंका नगर्ने बताउनुभएको छ, क्यासमेरोले भने कि उनी केवल उनको सृष्टिको समयमा केवल आमालाई पछ्याइरहेका छन्।
क्यासमेरो र मातृ-भेनिसिया मागाडा डे फेरिया क्यामेमेरा
उनको शब्दहरुमा ... "मेरी आमा सधैं मेरो साथ थियो, तिनले सधैं मलाई समर्थन गरे र भगवानको लागि म मेरो परिवारलाई मद्दत गर्न सक्छु। मलाई खुशी छ कि मैले उनको छेउमा हेरेँ जब मलाई यो भन्दा बढी चाहिन्छ, "साओ पाओलो खेलाडीले भने।
क्यासमेरो दुई बहिष्कार छन्। तिनको भाइ, लुकास क्यासमेरो र बिनका क्यामेमेरा नाउँको सानो बहिनी।
Casemiro र Siblings
"जब म घरमा छु, मेरो भाइले केही फिकक कदमहरू छोड्नुहुन्छ (हँसिन्छ)।" तर हामीसँग रचनात्मकता पनि छ। लुकास कोरिगोग्राफी मा मदद गर्दछ " उनीहरुसँगको सम्बन्धमा उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईएको छ।
बियानका क्यासमेरोको अर्डर हेर्ने हो रियल म्याड्रिड म्याचहरू। उनी आफ्नो वृद्ध भाइ हेर्न मन पराउँछन्। उनको अनुसार "यो चलचित्र जस्तै थियो"। तर वास्तवमा वास्तविक। उनले आफ्नो पुरानो भाइको लागि धोका दिँदा सबै 90 मिनेट नाक गर्न सक्थे।
Bianca- उनको पुरानो भाइ, क्यासेमिरो को नशे की लत
आफ्नो व्यस्त बाट रियल म्याड्रिड प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू, क्यासमेरो अझै पनि आफ्नो भाइसँगको गुणस्तर भेटिन्छ। तल फुटबल स्टार उनको पूल मा आफ्नो भाइ संग राम्रो समय छ।
क्यासमेरो- भाइबहिनीहरूसँग बिताउने गुणस्तर पूल समय
Casemiro Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
क्यासमेरोको प्रेम कथा एक महिला, अन्ना मारियाना ओर्टेगा ब्रह्म, एक देशी घिमिरे ब्राजिलियन। जो जोडीले जून 2014 मा गाँठो बाँडे। समयमा अन्ना मारियाना ओर्टेगा 25 र क्यासमेरो 22-वर्षीया थियो।
प्रेम पक्षी- क्यासमेरो र अन्ना उनको विवाहको दिनमा
सुन्दर अन्ना जन्मे 12 जुलाई 1989 मा उनको फुटबलर पति भन्दा3वर्ष भन्दा पुरानो हो।
प्रेम पक्षीहरू- क्यासमेरो र अन्ना
अन्ना मा चित्रण गरिएको छ ब्राजिलियन श्रृङ्खला उद्योग, कुनै आश्चर्य छैन कि उनी सधै उनको राम्रो लगिरहेको छ चित्रहरु। तल उनको कर्तव्यको तस्वीर हो।
क्यासमेरोको पत्नीले के गरिरहेको छ
व्यावसायिक मेकअप कलाकार एक लोकप्रियबाट आउँछ ब्राजिलियन परिवार। त्यो एक छ चार अन्ना पाउला ओर्टेगाको बहिनीहरू, अन्ना क्यारोल ओटेगा र अन्ना बियाट्रीज Ortega।
उनको Instagram पृष्ठ को अनुसार, त्यो पनि एक हो व्यापार प्रशासन स्नातक। अन्ना धेरै छ सक्रिय सोशल मिडियामा। उनी प्रायः स्वयंसेवाहरू वा उनको र तिनका व्यक्तिहरू विशेष क्षणहरू सँगै साझेदारी गर्दै छन्। तिनीहरूसँग सारा क्यासमेरो नाउँ गरेको एक बालिका छन्।
क्यासमेरोको परिवार फोटो
Casemiro Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -एक चोटि रोग थियो
14 उमेरमा, क्यासमेरो हेपेटाइटिसको पहिचान भएको थियो। यो एक समय उहाँ पुग्नुभयो साओ पाउलो वरिष्ठ फुटबलमा भाग लिन क्लब। एक समय उनको स्वास्थ्य उसलाई असफल भयो।
त्यस समयमा, गरीब क्यामेमेमेरा धेरै कमजोर र बीमार लगिरहेको थियो। उहाँले अभ्यास गर्न सक्षम नभएसम्म तीन महिना बिताउनुभयो। उनको शब्दहरुमा ...
"मैले साओ पाउलोको चाँडै नै मलाई यो समस्या थियो, हेपेटाइटिसको रूपमा चिनिने रोग। मैले केही समय बिना प्रशिक्षण बिना, खेल्न सकेन। म बेपरवाह र चिन्तित थिएँ म असफल भएको छु। धेरै मानिसहरूले मेरो मनमा शान्तिको बारेमा कुरा गरे। एक बिन्दुमा मैले मैले बरामद गरे पछि फुटबल छोडेर सोधे। मेरो अतीत र पारिवारिक पीडाले मलाई अझ धेरै बलियो बनायो।
यो एक पटक गरीब भन्दा लामो समय लागेन र समय मा अस्वस्थ ताराले म्यानमा स्विम सुरु गर्यो।
Casemiro Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -मकलेले बाट निर्माण
क्यामेमेरो- मेकलेलेबाट भवन
एक बल विजेता प्रति उत्कृष्टता र एक कुशल वितरक जसले बनाएको से बनाएको छ .सामान्य प्रवृतिहरु पछि केसीमेरो र मेनेली दुवै पछि लागेका छन। मालेलेले दुई ला लिगा खिताब र तीन च्याम्पियन्स लीगलाई तीन साता सातागोगो बर्नबेउमा पेल्स ट्राफिक पछि चेल्सी छोडेर अघि बढे। यो उपलब्धि को एक अपरिवर्तनीय अवधि थियो, जो कि उनको प्रस्थान पछि दोहोर्याइएन।
वास्तवमा, क्यानलको चाल पछि तीन वर्षमा, रियल म्याड्रिड एकल ट्राफी जित्न असफल भयो। स्पष्टतः, उनको सामरिक बुद्धि, वास्तविक अनुशासन, टोलीको मिडफिल्डमा अयोग्य पारित र रक्षात्मक विश्वसनीयता मिस थियो। यो आक्रामक थपिएको क्यासमेरोले भरिएको थियो, निपटने कुकुर, शक्ति र सामरिक रक्षात्मक मिडफील्ड खुफिया द्वारा सराहना गरिएको छ। रियल म्याड्रिड प्रशंसक।
क्यासमेरो- रियल म्याड्रिडका प्रशंसकहरूको रूपमा प्रशंसा गरिन्छ
Casemiro Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -केन्टसँग तुलना
प्रश्न हो; क्यासमेरो र को बीच राम्रो छ N'golo Kante? ...
क्यासमेरो र केन्ट बीच, अझ राम्रो छ?
कोहि राम्रो छ? ... यो क्यासेमिरियो OR Kante?? ...
ब्राजिल फुटबल डायरी
गेब्रिएल मार्टिनेल्ली बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
Rodrygo गोल्डहुड स्टोरी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू जान्छ
एल्टन सोर्स बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
यसका लागि उनीहरुसँग भेटघाट हुन सकेनन्
डेभीड नेरेस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
अगस्ट 23, 2019
रोबर्ट कार्लोस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
डिसेम्बर 25, 2017
डगलस कोस्टा बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
जुन 12, 2018
सैंटियागो सोलारी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
नोभेम्बर 16, 2018
गब्रिएल यीशु बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
सेप्टेम्बर 4, 2017